Aabe ku aaway? - NETBEINS
:Aabe ku aaway?
Dadku waa sida ubixii oo kale, kuwo waa la jecelyahay, qaarkood waxbaa laga sheegaa, kuwo waa laga taxadaraa, qaar waa la iska hilmaamaa, qaar aad bay caan u yihiin, kuwo na lama soo hadal qaado. Hase ahaatee, haddana sida ubixii oo kale, ayaan dhalanaa innaga oo siyaabo kala duwan u qurxoon. Balse qof walbaa ma […]
By admin June 9, 2019, 6:21 AM
Dadku waa sida ubixii oo kale, kuwo waa la jecelyahay, qaarkood waxbaa laga sheegaa, kuwo waa laga taxadaraa, qaar waa la iska hilmaamaa, qaar aad bay caan u yihiin, kuwo na lama soo hadal qaado. Hase ahaatee, haddana sida ubixii oo kale, ayaan dhalanaa innaga oo siyaabo kala duwan u qurxoon. Balse qof walbaa ma arko quruxdaas. Qaarkeen waa la haruufaa, dhintaan, sidoo kale meel cidlo ah u dambeeyaan sida ubaxa oo kale. Sababtu waxa ay tahay qaarkeen waa ay isdhiibaan, qaarna nolosha ayey la hardamaan.
Bini-aadamku mararka qaar doorashadooda iyagaa go’aan ka gaara ama doorashada lafteeda ayaa iga go’aan u gaarta. Aabbe ayaa ka tagay gabar yar oo uu dhalay adduunka na ku cidleeyey. Sahra hooyadeed waxa ay dhimatay iyada oo saddex sano jir ah, kaddib markii ay shil gaari la kulantay. Sahra aabbeheed waxa uu guursaday islaan kale, oo Sahra hooyadeed waa ay kala tageen inta aysan dhiman ka hoe. Sahra Aabbeheed waxa uu u geeynayaa xaaskiisa labaad si ay u baxnaaniso oo ay u xannaaneyso, laakiin waa ay ka biyo diideysaa. Sahra eeddadeed ayaa arkaysa gabadha yar ee korriimadeeda la isku tuurtuurayo, kaddib na waxa ay dusha u ridanaysaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd. Eeddadu waxa ay ahayd eeddo asxaan badan, maddaama ay gurigeeda keentay Sahra, hase yeeshee, ilmaheeda lama aysan mid dhigin Sahra oo shaqaale jikada iyo musqulaha nadiifisa ayay ka dhigtay.
Sahra uma aysan noolayn sida carruurta qeyrkeed ah, oo ma aysan helin waxbarasho iyo lebbis qurxoon oo lamid ah kan ciidaha ilmaha loo xiro, oo waa ay ka takoornayd jaalkeed. Ma aysan dareemin jacayl hooyo iyo mid aabbe koona oo adeegto guri ayay deris la noqotay kuna garaadsatay. Subax walba waxa ay ku waabariisataa eeddo oo leh, Sahra, Sahra, Sahra, kac waa 5:00 oo subaxnimo e. Istaag oo quraacda ilmaha iigu diyaari si aysan iskuulka uga daahin.
Saddex dhifasho oo jeedal ama shaamuug ah dabada ayay u galisaa, kac hurdada ha isku dhajin na, waa ay u sii raacisaa.
Eedo jeedalka iga daa, waa ballan in aan wax walba waqtigooda ku diyaarin doonee, ayay Sahra ku cabataa. Haddii aad shaqadaada kasoo bixi weyso oo aan adiga oo jiifa ku arko, wax cunto ah iguma hilid ee la soco, ayay eeddadii ku hanjabeysaa. Shaqada guri waxaa usii dheeraa Sahra, carruurta loodkeed ah ee eeddadeed dhashay oo markasta ku amar ku taagleeya. Waxa ay ula dhaqmaan sida addoontii oo kale, oo mararka qaar waxa ay ku dilaan maxaad dharka aad dhaqday noogu feerayn weysay/kaawadeyn weysay.
Maalin maalmaha kamid ah ayay Sahra si degdeg ah u baxday iyada oo saylada adeeg u doontay si ay quraac u sameyso, maaddama ay marti eedaddeed u timid, iyada oo ka cabsanaysa in ay daahdo oo gacan loo qaado ayay suuqa u carartay. Iyada oo lugeynaysa suuqqa dhexdiisa, ayaa gaari qam ah oo beensal ah agteeda lagu soo baakimay. Durbadiiba waxaa kasoo dagay gaariga nin xooggan oo murqo weyn, Sahra ayuuna gacanta ku dhagay daf, kaddib na madax-madax gaariga ugu tuuray. Waxa ay isku dayday in ay dagaallanto balse tabarteeda oo yareyd awgeed, uma aysan babacdhigi karin ninka xoog weynaha ah. Sanka ayuu ka saaray jeex maro ah oo lagu buufiyey maaddada Chloroform ee dadka suuxisa, waana ay miirdaboolantay Sahra.
Eeddo oo xanaaqsan oo ciilku qanjirrada joogo, ayaa suuqa timid iyada oo raadineysa Sahra si ay canaan iyo jeedal dusha uga tuurto balse waa kale ayaa ku baryey oo waa ay weysay addoontii u shaqeyn jirtay. Waa ay baafisay oo dadkii uu dhan iskugu yeertay, hase ahaatee, waa ay ku hungowday. Maalin kaddib maqnaanshiyaha Sahra kaddib ayaa ay eeddadii farriin gaarsiiyey walaalkeed, Sahra aabbeheed oo dhul fog ku maqnaa. Kaddib dhammaan reerkii waa ay baroorteen oo cir iyo dhul ba ka raadiyeen Sahra raq iyo ruux ba inkastoo aysan u suurtogelin heliddeeda.
Harraad iyo xiiq dheer ka bacdi, waxaa la helay Sahra oo mayd ah oo beel darxumo u taal. Qeylo iyo habarwacasho oohin iyo isi-sabarsiin kaddib, Sahra waxaa loo galbiyey gurigeedii rasmiga ahaa. Eeddadii waa ay balanbashay hoy iyo harsiimana waa ay ka tagtay, maaddama aysan Sahra ula dhaqmin sidii eeddo laga rabay, Hooyonimo iskaba daaye. Aabbihii afka labadii ayuu yeeray oo xaaladdiisa caafimaad lama qiyaasi karin!
Waxa ay ahayd gabadha kaliya ee uu adduunka ka haystay, nasiib darro se, daryeel aabbonimo na kama aysan helin, waqtina ma aysan wada qaadan.
Sheekadani waxa ay tusaale u noqon kartaa boqollaal carruurta Soomaaliyeed ah oo aabbayaashood ka tageen sababo lasoo darsat awgood. Aabbayaal aan jixin-jixin lahayn oo kaliya yaqaan sida wax loo cuno, loo xirto ama khaadka loo ruugo. Aabbayal aan mas’uuliyad iska saarin ilmaha ay dhaleen aqoon na u lahayn xaquuqdooda.
Ninkastaa aabbe waa noqon karaa balse aabbe kasta ma noqon karo mid mas’uuladda dhowra. Aabbenimadu ma ahan in aad carruur yeelato, ee waa in aad koriso oo kaalintooda kasoo baxdo.